Isomiso sesiqala ukushaya kuzwele esifundeni iZululand – Ubukhosi
Home/ Ezanamuhla/Isomiso sesiqala ukushaya kuzwele esifundeni iZululand
Isomiso sesiqala ukushaya kuzwele esifundeni iZululand
KUSAZOBA umqansa emphakathini waseZululand ukuba wedlule enkingeni yokuswela amanzi ngenxa yokuthi uMkhandlu wesifunda, iZululand, ubhekene nengwadla yokuthola imali eyanele ukuze ukwazi ukufaka ingqalasizinda yamanzi.
Lokhu kuvezwe iMeya, iNkosi uMzamo Buthelezi enkulumweni ekhethekile abe nayo nelaboHlanga. UShenge uthe uMasipala wesifunda okuyiwo ngokomthetho okumele uhlinzekele ngamanzi omasipala abancane udinga imali engaphezulu kwaleyo eyisabelo sonyaka abasitholayo ukuze ubhekane nengqalasizinda yamanzi kubona bonke omasipala abangaphansi kweZululand.
Lo Masipala ongabanye abahlonzwa njengabashawe kakhulu isomiso ngonyaka odlule, udinga imali engaphezulu kwezigidigidi ezili-R1.4, ukuze ukwazi ukumbela abantu amanzi asuswa phansi ngenxa yokuthi amadamu amaningi obuthembele kuwo asesimweni sengcindezi.
“Ngokomthetho wokusebenza komasipala yithi njengoMkhandlu omkhulu waseZululand esibhekene nomsebenzi wokuhambisa amanzi kubantu kodwa inkinga esinayo ukuthi imali ayikho njengoba sidinga okungenani imali eyizigidigidi ezi-R1.4. Lokhu kunzima ukuba kwenzeke ngoba isabelomali sethu sonyaka singaphansi kakhulu kwale mali okudingeka siyithole ukuze sifakele umphakathi amanzi. Okunye esibhekene nakho ukuthi ingqalasizinda yethu yamanzi okungamapayipi ahamba ngaphansi naleyo edonsa amanzi ngaphansi isindala kakhulu. Kwayona isidinga ukulungiswa nokunzima ukukwenza ngoba kuyabiza. Iningi lamapayipi ethu ahambisa amanzi elokhu afakwa uhulumeni waKwaZulu kanti uma elungiswa kungathatha imali enkulu nokungenza singakwazi ukubhekana nokuba silwe nesomiso nendlala,” kusho iMeya.
Imifula emikhulu yaseZululand ebiphakela omasipala abaningi abangaphansi kwayo, ishile ngonyaka odlule ngenxa yesomiso ebesihlasele izwelonke ikakhulukazi iKwaZulu-Natal, iFree State, iNorth West neMpumalanga.
Lokhu kuzekwaholela ekutheni uHulumeni anikeze iKwaZulu-Natal imali eyizigidi ezingama-R400 ukuze kubhekwane nemiphumela yesomiso. Le mali ibingafinyeleli ngisho engxenyeni yaleyo edingwa uMasipala wesifunda iZululand okuyilapho obesekubonakala imfuyo ifa ngapha nangapha enye itholakala isifele eduze kwemifula eyayisuke inamanzi kodwa esishile.
Kuze kwaphuma ngisho isidumbu endaweni yakwaNongoma ngenxa yomphakathi obubanga amanzi, uxakwe yisomiso.
UMkhandlu ugcine usukhipha isimemezelo semigomo emisha ezolandelwa uma kusetshenziswa amanzi nobekufaka phakathi ukuvalwa kwezindawo zokuwasha izimoto kanti lezo eziqashisa ngezindawo zokulala besezisebenzisa amabhakede. EBaqulusini yikhona lapho okubonakale khona isomiso sigadla kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izindawo ezakhele iZululand.
IMeya uButhelezi ithe uhlelo asebethembele kulo ukuthi lungabasiza olokuthi kusetshenziswe amanzi adonswa phansi kodwa nakhona ingwadla ekhona eyokuthi ayikho imali yokunakekela leyo mishini ezobe isifakiwe.
Uthe kuseyinto esazothatha isikhathi ukuba bayinqobe ngoba uma beluqala lolu hlelo kuyofanele bachithe imali eningi kodwa bebe bengawenelisanga wonke umphakathi.
Ubuye waveza ukuthi nakuba kukhona imifula engashi eZululand kodwa inkinga yayo ukuthi amanzi akhona awalona uhlobo olulungele ukuphuzwa umphakathi. “Yize sinayo imifula ebonakala ingashi ubusika nehlobo kodwa iqiniso ukuthi amanzi akhona asuke engakulungele ukuba aphuzwe abantu kunalokho angaphuzwa yimfuyo kuphela. Yingakho kunzima nathi ukuba siyisebenzise nanokuthi uma sifisa ukuwathatha lawo manzi nakhona kudingeka ucwaningo olunzulu ngawo nemishini ebizayo ukuze aguqulwe abesesimeni sokuthi angaphuzwa abantu,’’ kusho uButhelezi.
Ukwembulwa kweTshe leLembe ngowe-1954